Axmed Madoobe oo kulan deg deg isagu yeeray Wasiiradiisa [Ujeedka]
KISMAAYO, Soomaaliya - Madaxwaynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam [Axmed Madoobe] ayaa waxa uu maanta Sabti ah kulan deg deg ah uu la yeeshay qaar kamid ah xubnahiisa Wasiiradda, sida uu ogaaday Warsidaha Garowe Online.
Kulanka ayaa diiradda lagu saarey xaaladihii ugu dambeeyay ee degaanada Jubbaland, gaara ahaan shaqaaqooyin ka dhacay magaaalada Garbahaarey, kadib markii lagu banaanbaxay Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan maamulka, oo halkaasi gaarey.
Agaasimahii hore ee Villa Somalia, haatana noqday Taliyaha Hay’adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya, Fahad Yaasiin, ayaa lagu eedeeyay inuu gadaal ka riixayo kacdoonka ka socda Garbahaarey ee looga soo horjeedo Jubbaland.
Danta ugu wayn ee uu ka leeyahay ayaa ah sidii uu isbedel ugu sameyn lahaa hogaanka Jubbaland, oo Madaxweyne Axmed Madoobe lala dagaalamayo inuusan xukunka kusoo laaban doorashada soo socota.
Shirka Gollaha Wasiiradda Jubbaland ayaa lagu lafa-gurey weerar ay ciidamo ka tirsan kuwa Daraawiista ku qaadeen xarunta Nabad Sugida ee Kismaayo, halkaasoo ay kala baxeen askari, kaasoo ay soo xireen Nabad Sugida [Madax-kuti].
Weerarka oo dhacay maalintii Jimcahii lasoo dhaacay ayaa horseeday dagaal toos ah oo dhexmaray ciidamada qaab beeleed u abaabulan iyo kuwa Nabad Sugida Jubbaland, waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada soo kala gaarey.
Illo xog ogaal ah oo ku dhow Madaxtooyadda Jubbaland ayaa u sheegay Warsidaha GO in qaar kamid ah Askarta weerartay dhismaha Nabad Sugida Jubbaland la xiray, islamarkaana amarka lagu soo xiray uu bixiyay Madaxwayne Axmed Madoobe.
Xaafadaha ku dhow xarunta Nabad-sugidda ayey wararku intaas ku darayaan in lagu soo rogay Bandow, islamarkaana shacabka aanan loo ogalayn inay shacabka wadooyinka qaar soo gala dhismaha isticmaalaan, iyo inay dhaqdhaqaaq badan ay sameeyaan.
Shirka deg deg ah ee uu qabtay Axmed Madoobe waxaa lagu soo qaaday xasaradaha ka taagneed Dekada Kismaayo, taasoo ka dhalatay markii Markab halkaasi ku xiran kuwaas oo muran cashuureed ka taagan yahay.
Kulanka ayaa ahaa mid ka duwan kuwii caadiga ahaa ee uu Gollahiisa Wasiirada ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xili maamulkaan la filayo in doorasho aad inta uusan dhamaan sanadkaan.
Dowlada Federaalka ayaa lagu edeynayaa in xasilooni daro lamid ah midda ururka Al Shabaab ku hayo degaanada Jubaland ku hayaan iyagoo iska horkeenaya qabaa’ilada daga maamul giboleedkaas.
Wasiiro ka tagey Muqdisho oo Lacag ku wareejiyay Axmed Madoobe
Soomaliya 26.05.2018. 13:27
Jubbaland ayaa ku dhaliishay dowladda Federaalka inaysan waxban u qaban tan iyo markii la doortay...
Keating oo kulan gaar ah Kismaayo kula yeeshay madaxda maamullada
Soomaliya 03.09.2018. 12:28
Soomaaliya: Xildhibaan ku geeriyooday Kismaayo
Soomaliya 14.03.2018. 11:25
Soomaaliya: Axmed Madoobe oo shir gudoomiyay Kulan gaar ah
War Saxaafaded 26.11.2017. 15:22
Axmed Madoobe ka degay Muqdisho [Sawirrda soo dhaweyntiisa]
Soomaliya 25.03.2019. 12:18
Al-Shabaab iyo Jubbaland oo Malaayiin dollar ka hela Dhoofinta Dhuxusha
Soomaliya 17.11.2018. 07:54
Shir looga hadlay Amniga Jubbaland oo lagu qabtey Kismaayo [Sawirro]
War Saxaafaded 05.11.2018. 14:06